Ngaba amalungu e-UNWTO kufuneka abhukishe amatikiti aya eMarrakesh ngoku? Hayi!!!
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Ngaba amalungu e-UNWTO kufuneka abhukishe amatikiti aya eMarrakesh ngoku? Hayi!!!
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeShishini lokuhlangana • Iindaba eziNqabileyo eMorocco • iindaba • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Septemba 13, 2021
I-UNWTO kunye nabaphathiswa bezokhenketho abavela kumazwe angaphezu kwekhulu bakwinkqubo yokuthenga amatikiti okuzimasa iNdibano eNkulu yama-100 yoMbutho wezoKhenketho weHlabathi.
Ngokwolwazi olufunyenwe ngaphakathi kulawulo lwe-UNWTO akukho matikiti anokufuneka, ngaphandle kwekhompyuter elungileyo kunye nonxibelelwano lwe-intanethi ukuya kulo msitho.
The Ingqungquthela yama-24 yoMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) Imiselwe ukuba iqhubeke ukusuka nge-30 kaNovemba ukuya nge-3 kuDisemba eMarakesh, eMorocco.
eTurboNews yaxela kwangaphambili ukumiswa kweNdibano yeZizwe eziManyeneyo ngoJulayi. Kwangoko nje kule nyanga oku kuqikelelweyo kwaba yinyani xa i-UNWTO yenza le mihla intsha ukuba ibe semthethweni.
Imithombo engenisiweyo ngaphakathi kuMbutho wezoKhenketho weHlabathi ngoku icacisa ukuba isicwangciso esahlukileyo sinokuba sisenziwa.
Nditsho nokugonywa ngokupheleleyo kwabahambi ukuya eMorocco bayalumkiswa ngoorhulumente, kubandakanya ne-United States ukuthintela uhambo oluya e-Kingdom of Morocco ngenxa yesipikha kwi-Delta eyahlukileyo esasazeka kwi-Coronavirus.
Inkqubo yezonyango eMorocco ayixhotyiswanga ukunyanga ukonyuka kwamatyala e-COVID-19, kwaye ukubamba iNdibano yeZizwe eziManyeneyo kweli Lizwe laseMntla Afrika kunokuba ngabathunywa abasemngciphekweni abavela phantse kumazwe ayi-160 abafuni kuthatha.
Ukulungiselela ngokusemthethweni lo msitho ubalulekileyo usaqhubeka, kodwa umthombo wolwazi ngaphakathi kwikomkhulu le-UNWTO eMadrid watyikitya eTurboNews Amalungiselelo eNdibano Jikelele yokuqala ilungiselelwe ngeli xesha.
Kungalindelwa ukuba olo tshintsho alunakubhengezwa kude kube ngumzuzu wokugqibela kwaye kunokuba nesizathu sokuzingca unobhala-jikelele we-UNWTO eTurboNews kusenziwa uphando ngoku.
Njengesiqhelo, eTurboNews Ndizamile ukufumana ukungqinisisa ngokuthe ngqo kwi-UNWTO.
Ngelishwa, Umphathi Wezonxibelelwano we-UNWTO uMarcelo Risi waba lixhoba lombutho oqhutywa luloyiko, izoyikiso kunye noxinzelelo, kwaye ukunxibelelana ngokukhululekileyo yinxalenye yento a umlawuli wonxibelelwano akuvumelekanga ukwenza.